Xog: Maxaad kala socotaa xiriirka qarsoodiga ee Xaaf iyo sirdoonka SAACS? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Maxaad kala socotaa xiriirka qarsoodiga ee Xaaf iyo sirdoonka SAACS?
Xog: Maxaad kala socotaa xiriirka qarsoodiga ee Xaaf iyo sirdoonka SAACS?
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka Galmudug ayaa heshiis wada-shaqeyn oo qarsoodi ah la leh shirkad sirdoon oo ka dhisan dalka Mareykanka, sida ay baaritaan ku ogaatay Caasimada Online.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in tan iyo bishii April ee sanadkan, ay shirkadda sirdoonoka SAACS Independent Intelligence Agency ay talooyin siineysay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Lama yaqaan nooca talooyinkan iyo haddii shirkaddan ay deegaanada Galmudug ka fulineyso howl-gallo sirdoon. Waxaan sidoo kale caddeyn haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka war-hayso arrintan.
Shirkadda SAACS Independent Intelligence Agency, ayaa waxa uu fadhigeedu yahay magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka, waxaana madax ka ah gabar Cuban-American ah, oo lagu magacaabo Marissa Santana.
Shirkadda SAACS Independent Intelligence Agency ayaa waxa ay sidoo kale tan iyo sanadii 2015 la shaqeyneysay shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Galeyr Security Services Corps (GSS), oo Iyana dhanka ammaanka ka shaqeysa.